Homeसमाचारआफ्नो पाइलट बाबाले उडाएको प्लेनमा छोरीको पहिलो उडान, भिडियोले जित्यो लाखौंको मन (भिडियो सहित)
October 17, 2021 admin समाचार 2878
सामाजिक सञ्जालमा सानी बालिकाको एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ। जसमा उनी उडानको सिटमा बसेकी छिन्।
तर एकै छिनमा उनले केहि देख्छिन् कि उनको खुशी को कुनै सिमा हुँदैन । सानी बालिकाको यी प्रतिक्रियाहरु प्रयोगक`र्ताहरु`लाई धेरै मन लोभ्याएको छ । पुरा कुरा जानौं ।।
वास्तव मा, यो भिडियो एक प्रयोग|कर्ताले इन्स्टाग्रा|ममा सावैजनिक गरेकी छन् । जसमा एक बालिका उडानका लागि जहा`जको सिटमा बसीरहेकी छन् । अन्य यात्रुहरु एक एक गरी उडानमा सवार छन्। त्यसपछि त्यहाँ पायलट को पोशाक मा एक व्यक्ति को प्रवेश हुन्छ, जुन देखेर बालिका खुसी हुन्छिन् र पापा पापा बोला|उन थाल्छिन्।
उडानमा पाइलट बुबा|लाई देखेर, बालिका खुशीले उफ्रिन्छिन्। अर्कोतर्फ, ककपिट तिर जाँदै गरेका बालिकाको बुबाले पनि हात हल्लाएर बालिकालाई अभिवादन गरे। बुबालाई देखेर बालिका`का प्रतिक्रिया धेरै प्यारो छ।
यो भिडियो बालिका|की आमाले खिचेको बताइए|को छ। भिडियो को पृष्ठभूमि मा, एक महिलाको आवाज बालिकालाई प्रोत्साहित गरीरहेको सुनिन्छ। बालिकाको नाम शनाया मोति|हार र भिडियो बनाउने आमाको नाम प्रियंका मनोहत हो। ती बालिका|की आमाले इन्स्टाग्रा|ममा उक्त भिडियो सेयर गरेकी छिन्।
यस भिडियोको क्याप्स`नमा लेखिएको छ ( मेरो पहिलो उडान बुबा संग । उनी दिल्ली को लागी उडेकी थिइन्। म धेरै उत्साहित छु ।।। यो मेरो सबैभन्दा राम्रो उडान भएको छ। आइ लभ यु पापा ।
August 29, 2020 admin समाचार 13673
April 11, 2021 admin समाचार 3765
January 22, 2021 admin समाचार 4538
गायिका डा. रानी शा’क्यले चर्चित गायक प्रमोद खरेलसँगको सहकार्यमा युगल गीत ‘चल्यो मायाको बतास’सार्व’जनिक गरेकी छन् । डान्सिङ शैलीको यस गीतको म्युजिक भिडियोमा नेपाली रज’तपटका सदाबहार नायक दिलिप रायमाझी र नायिका आशिष्मा नकर्मीको नृत्य र
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (222793)